भोलि माघ २७ गते सोमबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल!
तपाईको स्वभावमा उग्रता रहनेछ । परिश्रम गरेपछि निर्धारित कार्य पूरा हुनेछ । शारीरिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । तपाईले ग्लानिको अनुभव गर्नुहुनेछ । भोजन र निन्द्रामा अनियमितता रहनेछ । स्त्री र पानीबाट टाढा रहनुहोला ।
सरकारी कार्यमा सफलता वा लाभ मिल्नेछ । तपाई निकै संवेदनशील रहनुहुनेछ । साहित्य लेखन तथा कला क्षेत्रमा तपाईले योगदान गर्नुहुनेछ । परिवारको सदस्य विशेष रूपले आमासँग आत्मीयता बढ्नेछ । छोटो यात्रा हुन सक्छ ।
तपाईको दिनको सुरुवात स्फूर्ति र उर्जाका साथ हुनेछ । निर्धारित कार्य पूरा हुनेछ । आर्थिक योजनाको कारण तपाईको समस्या कम हुनेछ । पेसा वा व्यवसायमा तपाईलाई सहयोगीको सहयोग मिल्नेछ । मित्र तथा प्रियजनसँगको भेटले खुशी बढ्नेछ ।
परिवारको सदस्यसँग मनमुटाव हुनेछ । तपाईको साथी परिवार तथा दिन निकै राम्रो रहनेछ । शुभ समाचार मिल्नेछ तथा आर्थिक लाभ पनि हुनेछ । श्रीमतीसँग राम्रो समय बित्नेछ । शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ ।
समाजमा मान-सम्मान वृद्दि हुनेछ । शारीरिक स्वास्थ्य खराब हुन् सक्छ । आफ्नो बोलि र व्यवहारमा ध्यान राख्नुहोला । तपाई निकै भावुक रहनुहुनेछ । खर्चको मात्रा अधिक रहनेछ । स्त्री वर्गबाट बच्नुहोला ।
शारीरिक र मानसिक चिन्ताले निराश रहनुहुनेछ । विविध क्षेत्रमा यश, कीर्ति र लाभ पाउनुहुनेछ । वृद्द तथा मित्रसँग तपाईको दिन आनन्दमा बित्नेछ । श्रीमती र बच्चासँग आनन्दमय समय बित्नेछ । दाम्पत्य जीवनमा आनन्द प्राप्त हुनेछ । सन्तानको राम्रो समाचार मिल्नेछ।
घर र कार्यस्थलमा निकै राम्रो वातावरण रहनेछ । स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । कार्यालयमा उच्च पदाधिकारीबाट तपाईको कार्यको चर्चा मिल्नेछ । आमाको तर्फबाट लाभ मिल्नेछ । सरकारी कार्यमा सफलता मिल्नेछ ।
तपाई शारीरिक र मानसिक रुपले थकान र आलस्यको अनुभव गर्नुहुनेछ । यसको प्रभाव व्यवसायिक क्षेत्रमा देख्न पाउनुहुनेछ । सन्तानसँग मतभेद हुनेछ । कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय नलिनुहोला ।
कुनै पनि नयाँ कार्य आरम्भ नगर्नुहोला । कफ तथा पेट सम्बन्धि समस्या रहनेछ । शल्यक्रिया जस्ता मामलालाई टाल्नुहोला । तपाई निकै व्यग्र र चिन्तित रहनुहुनेछ । पानीबाट टाढा रहनुहोला । खर्च वृद्धि हुनेछ । बोलि र व्यवहारमा ध्यान राख्नुहोला ।
दैनिक कार्य बाहेक तपाईले समय मनोरंजन तथा घुमेर बिताउनुहुनेछ । स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हुनेछ तथा साथीसँग घुम्न जानुहुनेछ । तपाईको व्यापार वृद्धि हुनेछ । सार्वजनिक जीवनमा मान-सम्मान बढ्नेछ । कार्यमा सफलताका साथसाथै स्वास्थ्य पनि राम्रो रहनेछ ।
कार्यमा सफलता पाउनको लागि दिन उत्तम रहेको छ । तपाईद्वारा गरिएको कार्यबाट प्रसिद्दी र सफलता मिल्नेछ । परिवारमा सौहार्दपूर्ण वातावरण रहनेछ । तन-मनबाट ताजगी र स्फूर्तिको अनुभव हुनेछ । खर्च वृद्दि हुनेछ ।
तपाईको कल्पना शक्तिमा निखार आउनेछ । तपाईको दिन साहित्य सिर्जनाको लागि उत्तम रहेको छ। विद्यार्थी विद्यामा राम्रो गर्नेछन् । तपाईको स्वभावमा भावुकता र कामुकता अधिक रहनेछ । मनमा भय रहनेछ । तपाईको लागि अनुकुल दिन रहेको छ ।
प्रकाशित : आइतबार, माघ २६, २०७६१३:४६
भोलि माघ २८ गते मंगलबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल!